Cunto Soomaali - Gpedia, Your Encyclopedia
Kani waa maqaal ku saabsan nooc ka mid ah cuntada dadka Soomaalida. Qoraalo kale fiiri cunto iyo raashin
Cunto Soomaali (Af-Ingiriis: Somali cuisine; Af-Carabi: مطبخ صومالي) waa cuntada ay caanka ku yihiin dadka Soomaalida meel kasta ooy aduunka kaga nool yihiin. Cunto Soomaaliga waxaa ka id ah cuntada hido iyo dhaqanka, casuumadaha, cuntada maalin kasta la isticmaalo iyo dhamaan raashinka dadka Soomaalidu isticmaalaan sida hilibka, sukhaarka, bariiska, baastada, garowga, heeda iyo wixii la mid ah. Sidoo kale waxa cunto Soomaaliga ka mid ah habka iyo qaabka dadka Soomaalida u diyaariyaan (kariyaan) cuntada, iyo noocyada u khaaska ah dadka Soomaalida.
1 Dadka Soomaalida
2 Noocyo kala duwan
Si la mid ah shacabka caalamka, bulshada Soomaalidu waxay hido iyo dhaqan u leeyihiin noocyo badan oo cunto ah, kuwaasi oo deegaanada ku kala duwan yihiin. Cuntooyinka Soomaalidu waxay ku kala duwan yihiin wakhtiyada kuwaasi oo siyaabo kala duwan loo diyaariyo wakhtiyada kala duwan. Inta ugu badan waxaa lagu darsadaa cuntooyinka wakhtiga quraaca, qadada iyo cashada, laakiin wakhtiyadu intaas kuma koobna. Noocyada wasladu ee deegaanada Soomaalida ku caanka ah waxaa ka mid ah xaniidka iyo waslada cad. Dadka Soomaalidu waxay waslada ku diyaariyaan hilib, khudaar, milix, saliid, biyo iyo xawaash kuwaasi oo si xirfad leh loo karkariyo ilaa ay gaadho heer nooca loogu talogalay ah.
Muuqaalada Cuntada Soomaalida
National Museum of Pasta Foods – Rome, Italy
↑ Beef Cubes with Vegetables (Suqaar) Cubes de Boeuf aux Légumes 
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Cunto_Soomaali&oldid=163218"